४ नेपाली युवती जो धनकै लागि 'खुंखार' बने - Nepali Virals
२१ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १०:३१	4,696 पटक-पढिएको
मायाँ, दया, प्रेम, कोमलता र करुणाका खानी हुन्- महिला । सानो तिनो समस्यामा पनि डराउने र रुने गर्छन महिला किनकि उनीहरुको मन कोमल हुन्छ । महिलाको मन पगाल्न कति पनि समय लाग्दैन । जस्तो सुकै शत्रुको होस् आपत बिपतमा सहयोग गर्न पछि हट्दैनन् उनीहरु । पीडाले भित्रभित्रै आफु गले पनि अरुलाई साहस र प्रेरणा दिन चुक्दैनन महिलाहरु । छिन मै आकाश झार्ने, पातलै फोड्ने जस्तो रिसाए पनि एकैछिनमा मन पग्ली हाल्छ महिलाहरुको ।
धेरै महिलामा यो ब्यबहार लागु हुन्छ । तर सबै महिला कहा उस्तै हुन्छन र । त्यसो त कठोर मन र खुंखार अपराधी भएर पनि निस्केका हुन्छन कतिपय । केहीले अपत्यारिलो अपराध गरेको समेत फेला परेको छ । यस्ता थुप्रै अपराधहरु होलान् तर यहाँ हामीले एकदमै ‘खुंखार’ अपराधमा संलग्न भनिएका ६ नेपाली युवतीको ’boutमा जानकारी दिदैछौ । ‘खुंखार’ यस मानेमा कि उनीहरुको अपराधको शैली बेग्लै छ । यी मध्ये कोहिले आफ्नै बुबाको हत्या गर्न लगाएका छन् भने कोहिले नक्कली धन्दा चलाएर प्रहरीलाई समेत ठगेका छन् । को हुन् त ४ नेपाली युवती जसले अपराध दुनियामा तहल्का मच्चाए ?
जसले नक्कली डाक्टर बनेर ठग्दै हिडे
गत पुस २० गते प्रहरीले डा. सुहाना केसी नाम गरेकी एक महिलालाई पक्राउ गर्यो । उनको वास्तविक नाम भगवती केसी हुन्, घर चाही गुल्मी । उनको ठगी गर्ने तरिका बिल्कुल भिन्दै छ । आफू डाक्टर भएको परिचय दिँदै उनले एक दर्जन युवालाई ठगी गरिन् । अहिले अदालतले उनलाई ५० हजार धरौटीमा छाडि दिएको छ । अदालतले मागेको ५० हजार धरौटीसमेत तिर्न नसक्दा उनी केही दिन जेलसमेत बस्नुपरेको थियो ।
एक युवकलाई प्रेमी बनाएर दिल्ली पुर्‍याएर बन्धक बनाएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आफूलाई डा. सुहाना केसीका रूपमा परिचय दिई चिकित्सक तथा धनाढ्यसँग नजिकिएर उनले ठगी गरेकी हुन् । दुई वर्षदेखि ठगी धन्दामा लागेकी भगवतीले सुरुमा पोखरालाई आधार बनाएर ठगी गरिन् । पोखराको फेवा अस्पतालमा केही समय उनले चिकित्सककै रूपमा कामसमेत गरेको खुलेको छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उनको वास्तविकता’bout समाचार छापेपछि उनी पोखराबाट भागेर काठमाडौं आएर ठगी गर्न थालेकी हुन् । काठमाडौं आएपछि उनले विभिन्न अस्पतालका चिकित्सक र धनाढ्यसँग सम्पर्क बढाएर ठगी गर्न थालेकी थिइन् । कफी पसलमा कफी पिएको पैसा नतिरेकोदेखि दसैँका वेला घरमा बसेर मस्ती गरेर ठगेकोसम्मका उजुरी छन् ।
ठगीका लागि अनेक उपाय लगाउने गरेकी उनले आफ्नो नाम पनि अनेक बताउने गरेकी थिइन् । आफूलाई डा. सुहाना, अदीति, सृष्टि केसीजस्ता नामले चिनाउँदै आएकी केसीले आफूलाई चिकित्सकका रूपमा मात्र नभएर डिआइजी सनत केसीकी छोरीका नाममा समेत परिचित गराएर ठग्ने गरेकी थिइन् । एक युवकले प्रेममा धोका दिएपछि आफूले यसरी ठगी गर्न थालेको उनले बयान दिएकी थिइन् ।
जसले आफ्नै बाबुको हत्या गराए
२० वर्षीया युवतीले हालै राजधानीमा आफ्नै बाबुको हत्या गरेकी छिन् । गत २० माघमा टोखाकी संगीता पाण्डे (महर्जन)ले माइतीको सम्पत्ति हात पार्न भाडाका अपराधी प्रयोग गरी बुबाको हत्या गरिन् । संगीताले दुई वर्षअघि नुवाकोट सुन्दरादेवीका सन्तोष पाण्डेसँग परिवारको सहमतिविनै प्रेमविवाह गरेकी थिइन् । तर, माइतीसँग दाइजोस्वरूप पैसा माग्दै आएकी थिइन् ।
‘भागेर गएकी छोरीलाई जग्गा दिन्नँ, छोरालाई चाहिन्छ’ भन्ने जवाफ बाबुले दिएपछि उनले हत्याको योजना बनाएकी हुन् । टोखाको साङलेखोलानजिकै बगरमा २१ माघमा ४३ वर्षीय माइला महर्जनको शव भेटिएको थियो । संगीताले चिनजानका विक्रम लामालाई २० लाख रुपैयाँ दिने सर्तमा बुबा, आमा र दाइको हत्याको ‘सुपारी’ दिएको खुलेपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी नै चकित भए । उनले सोही दिन आमा र दाइको पनि हत्याको योजना बनाएकी थिइन् । तर, बुबाको हत्यापछि हत्यामा संलग्न दुई युवक डराएर भागेपछि अरूको हत्या असफल भएको थियो ।
दुई वर्षअघि एमाले नेता सरदुल मियाँ हकको आफ्नै छोरी र श्रीमतीले नै भाडाका अपराधी प्रयोग गरी हत्या भएको थियो । नूर जहाँ खातुन र १९ वर्षीया छोरी रुबेदा खातुमले उनको हत्या गराएका थिए । रुबेदाको भारतीय नागरिक मोहम्मद शेखसँगको विवाहलाई अस्वीकार गर्दा उक्त हत्या भएको थियो ।
जसले बिहेकै दिन दुलाहाको सम्पती स्वाहा पारे
तीन महिना प्रेमको नाटक गरेर एक महिलाले प्रेमीको गहना ठगेर फरार भइन । पीडित हुन् स्याङ्जा घर भई गैँडाकाट बस्ने ३५ वर्षीय जयदेव पौडेल । बिहेको दिन मेकअप गर्न भनेर हिँडेकी प्रेमिका पाँच तोला गहना लिएर फरार भइदिइन् ।
पौडेल बिहेका लागि स्याङ्जाबाट जन्ती लिएर चितवन आएका थिए । प्रेमिकासँगै उनी नारायणघाट पुल्चोकको फिसटेल होटेलमा बसे । बिहेको दिन बिहान होटेलमा उनी दाह्री काटेर कपडा लगाउन थाले । प्रेमिका पनि नयाँ सारी र गहना लगाएर सजिन थालिन् । एकैछिन ब्युटिपार्लरबाट मेकअप गरेर फर्कने भन्दै होटेलबाट निस्किएकी प्रेमिका अहिलेसम्म बेपत्ता छिन् । मोबाइल अफ गरेर उनी फरार भइन् ।
गहनाकै लागि उनले त्यसरी प्रेमको नाटक गरेकी थिइन् । गोरखा घर बताउने २२ वर्षीया सुषमा लामिछानेसँग उनको गँैडाकोटमा रहेको आफ्नै पौडेल खाजा घरमा भेटेका थिए । युवतीको नक्कली प्रेममा पौडेलको करिब तीन लाख गुमेको छ ।
जसले इन्स्पेक्टरलाई नै ठगे
नेपाल प्रहरीकै इन्स्पेक्टरसँग प्रेमको नाटक गरेर ४० लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने एक महिला अहिले हिरासतमा छन् । दोलखाकी सिर्जना घिमिरेले इन्स्पेक्टर लोकनाथ लामिछानेलाई बिहे गर्ने भन्दै पटक–पटक पैसा लिएर ठगेकी हुन् । इन्स्पेक्टर लामिछाने नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा कार्यरत प्रहरी हुन् भने घिमिरे नर्स हुन् । घिमिरे दुई सन्तानकी आमा हुन् भने लामिछानेले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर बसेका हुन् ।
बिहे गर्ने र सँगै घर बनाएर बस्ने भन्दै घिमिरेले पटक–पटक गरी लामिछानेसँग ४० लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । लामिछानेले बिहेको कुरा गर्दा उनले टार्दै गइन् । पछि बिहे नगर्ने र पैसा पनि फिर्ता नदिने बताएपछि लामिछानेले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । उनी अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन् ।
अघिल्लो सेल्फी खिच्नु अघि ध्यान दिनुपर्ने १३ कुरा
पछिल्लो बिचित्रका १० हिन्दु मन्दिर